Ku dhejinta tibaaxaha asluubta: Ma hubtaa inaad si wanaagsan uga faa'iidaysanayso?
Posted by Tranquillus | Déc 10, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Rajo…: Foom edeb leh oo ku yaal dhamaadka iimaylka xirfadlaha ah si aad u daryeesho
Qaababka asluubaysan ayaa si fiican looga yaqaan goobta maamulka iyo adduunka xirfadda labadaba. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxaan u malaynayaa in aan haysano qaacidada saxda ah oo aan ku isticmaalno dhammaan waraaqahan xirfadlayaasha ah, marka laga reebo in ay ku jiraan qaar ka mid ah khaladaadka syntax. Kuwaani way faafeen oo haddaan laga taxadirin, waxay halis ugu jiraan inay sumcad-xumeeyaan cidda soo dirtay. Waxaad ku ogaan doontaa maqaalkan, isticmaalka saxda ah ee ay lagama maarmaanka u tahay in laga sameeyo qaacidada edeb leh "Rajada ..." Tani waxay ka fogaan doontaa kharashka isticmaalka qallafsan.
Weedha asluubta leh "Rajo...": Iska ilaali iska hor imaadka
Si loo soo gabagabeeyo iimaylka xirfadleyda ah, dad badan ayaa isticmaala dhowr qaacido oo asluub ​​leh sida: "Waxaan rajeynayaa inaan kaa maqlo, fadlan aqbal muujinta mahadnaqa qoto dheer" ama "Aniga oo rajaynaya in codsigeygu uu ku hayn doono dareenkaaga, hel muujinta ugu badan salaan qaali ah".
Kuwani waa tibaaxo khaldan oo edeb leh oo ay tahay inay ku soo dhex dhuunteen mid ka mid ah iimaylladaada xirfadlayaasha ah.
Waa maxay sababta qaababkan ay u khaldan yihiin?
Markaad ku bilawdo qaacidadaada asluubta ah dhamaadka iimaylka oo wata "Rajo...", waxaad isticmaali doontaa lifaaq. Sidan oo kale, iyada oo la raacayo xeerarka syntax ee luqadda Faransiiska, waa mawduuca ay tahay in la raaco kooxda erayada ku lifaaqan. Dariiq kasta oo kale oo loo maro waa khalad.
Runtii, markaad tidhaahdo "Anigoo rajeynaya inaan kaa maqlo, fadlan aqbal...", diidmadu lama xidhiidho mawduuc kasta. Oo hadday tahay inaan mid raadsano, waxay u badan tahay inaan ka fikirno wariyaha. Kaas oo xoogaa is burinaya.
READ Samee warqad codsi ah Dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Taas waxaa lagu macneeyey in hab-dhaqanka asluubaysan ee noocaas ah uu qofka ku aamino in uu yahay wariyaha ama guddoomiyaha cidda sugaysa ama rajaynaysa in uu war helo, taas oo ka soo horjeeda caqliga.
Waa maxay caanaha ugu habboon?
Halkii, weedha asluubaysan ee saxda ah waa: "Anigoo rajeynaya inaan kaa maqlo, fadlan aqbal muujinta mahadnaqayda qoto dheer" ama "Rajada in codsigeygu uu ku hayn doono dareenkaaga, fadlan. si aad u hesho muujinta salaantayda ugu caansan "
Intaa waxaa dheer, si loo soo gabagabeeyo email xirfad leh, waxaa jira khaladaad kale oo laga fogaado. Markaad adeegsanayso falka, ku ducayso qofka ugu horreeya ee kali ah, ku qor "waan ku baryayaa" ee ha qorin "waan ku qaatay". Kooxdan odhaahda ah ee u dambaysa waxay la xidhiidhaa falka “Qaado” oo aan shaqo ku lahayn weedhan asluubaysan.
Ogaanshaha nuucyadan higgaada iyo qaar ka mid ah xeerarka syntax waa lama huraan, gaar ahaan adduunka xirfadleyda. Khaladaadka kuwan oo kale ah ee laga helo warqad waxay noqon karaan kuwo dilaa ah oo kaa soo horjeeda. Sidoo kale xiriirka macmiilka ama alaab-qeybiyaha.
Ku dhejinta tibaaxaha asluubta: Ma hubtaa inaad si wanaagsan uga faa'iidaysanayso? Janaayo 7th, 2022Tranquillus
horeHabka asluubta leh ee loo isticmaalo borofisar ama macalin
socdaWarshada Gargaarka Caalamiga ah
Maxaa sharxaya cabsida qoraalka?
Muhiimadda mawduuca mawduuca ee emayl xirfadeed